Bulawayo, Zimbabwe, to Johannesburg, South Africa
Returning to Bulawayo station after visiting the Railway Museum found the tour train ready for the return journey back to Johannesburg in South Africa.
1-of-5) National Railways of Zimbabwe 20A class 'Garratt' 4-8-2+2-8-4 locomotive no. 740 'Ingwezi' (built by Beyer Peacock in 1957) ready to head the ‘Union Limited Zambezi’ on the first stage back to South Africa at Bulawayo station, Zimbabwe, 7th August 1992. It has evidently had a superficial rub down with paraffin soaked rags in an attempt to clean it, but the dirt has proved very stubborn.
2-of-5) National Railways of Zimbabwe 20A class 'Garratt' 4-8-2+2-8-4 locomotive no. 740 'Ingwezi' (built by Beyer Peacock in 1957) performs a run-past between Bulawayo and Heany Junction, Zimbabwe, as it heads the ‘Union Limited Zambezi’ tour train on the first stage back to South Africa, 7th August 1992. I was fortunate to have a footplate ride on this locomotive around here and the main memory is of the very loud noise of the steam jets of the mechanical stoker as they directed the coal around the firebox. These were the only NRZ locomotives fitted with these stokers.
3-of-5) South African Railways class 19D 4-8-2 steam locomotives nos. 3323 & 3334 (both built by the North British Locomotive Company in 1948) perform a run-past near Medike, South Africa, with the "Union Limited Zambezi" train organised by the Transnet Museum while heading back to Johannesburg from Zimbabwe, 8th August 1992.
4-of-5) South African class 15F 4-8-2 no. 3094 (built by the North British Locomotive Company in 1946) performs a run-past in late afternoon at Nylstroom, South Africa, with the "Union Limited Zambezi" train organised by the Transnet Museum on its return from Zimbabwe towards Johannesburg, 8th August 1992.
5-of-5) South African Railways class 16D 4-6-2 no. 860 (built by the Baldwin Locomotive Works in 1925-26) and class 16DA 4-6-2 no. 879 (built by Henschel in 1930) perform a run-past in late afternoon at Irene, just south of Pretoria, South Africa, with the ‘Union Limited Zambezi’ train organised by the Transnet Museum, on its return from Zimbabwe towards Johannesburg, 8th August 1992. These locomotives were actually designed to work the ‘Union Limited’ and ‘Union Express’ trains, which ran between Cape Town and Johannesburg and were the forerunnerst of the famous ‘Blue Train’.